Semalt Expert Anotsanangura Mafungiro Ekuru SEO MaAgence Ita
samsung hdd recovery.jpg" border="0" width="100%" style="margin-bottom:35px; margin-top:10px" align="absmiddle">
Panguva yeSeO site yekuongorora, munhu anokwanisa kupupurira maitiro akabudirira eSEO akashandiswauyewo nzira dzisati dzamboitika. Zvakajeka kuti dzimwe sangano reSeO rinoramba richivimba nezvakaipa. Ross Barber, Mutengi weKuteresi Achibudirira Semalt ,rinotsanangura zvikanganiso zvakawanzana izvo SEO vapeji vanowanzoita.
Kushandisa / kushandisa zvisina kunaka Meta Information
Meta inyanzvi inopa humwe ruzivo pane imwe nzvimbo yewebhu.Kunyange zvazvo zita reMeta uye tsanangudzo rinogona kunyatsoenderana nemafungiro evanhu uye rinogona kunyorwa nenzira dzakasiyana, kururamisamberi technique ichagara yakakosha. Chimbo cheketa pachako chinofanirwa kuva chinyorwa chinokosha cheji peji; kana pane maviri makurukeywords, zvose zvinofanira kuiswa. Kana zvakadaro, kune shoko rimwechete chete, zita rekambani rinogona kuenda pamwe naro.
Tsanangudzo yeMeta inofanira kunge inosanganisira mazwi makuru ehetera yekuitapakupedzisira. Apa ndipo paunowana mukana wekuzarura unhu hwakasiyana hwewebsite yako, uye kupa ruzivo rwezvauri peji yewebhuinotaura pamusoro payo kuti inokwezva vaeni vakakodzera. Matsipa asina simba Meta haana ruzivo rwakananga pamusoro pegadzirwa kana basa uyemazita avo mazita akafanana nevamwe mune mamwe mapeji ewebhu.
Kuti uwane tsanangudzo huru yeMeta, kudzokorora kwezita kubva kune mamwe mapejiuye kuwedzera kwehuwandu hwemashoko makuru hunofanira kudziviswa, pane kudaro, ruzivo rwakakosha runofanira kurega. Meta tsamba isina simba uyekutsanangurwa kusina kunaka kunogona kuderedza vashanyi kubva pakuona webhusaiti yenyu..
Kuisa Zvinyorwa Zvimwe Zvizhinji
Pasinei nezvimwe zvikwangwani zvakadai sekodeti yakavharidzirwa, nhasi maSMB akawanda mawebhusayithiyakavakwa paShoko Press. Mapapurigiramu makuru ekugadzira mapurogiramu anoshanda kupa humwe hutano pawebsite yako. Zvimwemapaji ari pawebsite yako anoratidza mazano makuru kuitira kuti zvishoma nezvishoma zvinotapira, zvichiita kuti vashanyi vamirire kutakura peji iri muGooglesystem apprise. Iwe unogona kutarisa izvi nekuitisa njere yeGoogle PageSpeed.
SEO inoshungurudzwa nekuunganidza ma plugins nemitemo nokukurumidza SEONyanzvi dzisingawanzove nekodhi uye programming knowledge. Kuti zvive nekuvandudza kubudirira, kunzwisisa dambudziko remapulagi anoshandiswa pawebhusaiti yako uye kubvisa izvo zvisingakoshi.
Kuwedzera kuiswa pasi pezvinhu zvitsva
Dzimwe nzvimbo dzepamusoro dzakanaka, dzakanyatsogadziriswa dzinosangana nemigumisiro yakaipa yekuwedzerazvinyorwa zvinyorwa kune mapeji matsva. Kakawanda, zvinouya nechinangwa chekushandisa senzira dzakawanda sezvinobvira. Dzimwe SEO firms zvikurukazhinji kuwandisa webhusaiti yako nemashoko akawanda. Kurwisa Copyscape yemapeji aya kunoratidza kuti ruzivo rwakanyanya kufananakune imwe webhusaiti, iyo inoshamisa inoshanda pamwe chete neOOO service provider sezvaunoita. Saka zvakakurudzirwa kunyora zvakarezvinyorwa zvako kana ukaona kuti yakafanana nemashoko kubva kune mamwe mapeji ewebhu uye nzvimbo. Zvadaro, tsvagai chikonzero neiSEO yakasimba yawakashandira yakaisa zvinhu zviri pawebsite yako.
Sezvo zvakakosha zvikuru kune bhizimisi kuti vabatane neSOO yakavimbikakusimba kuti uve nechokwadi chekuita basa rinobudirira, unogona kutanga kudzidza nezvevanopa SEO kubva pakuvashandira SEO kuongorora kana kuongorora kukuru kwewebhu rako. Kuenzanisa mamiriyoni emishumo nebasa renyu chaiyo rebhizimisi, iwe uchava nechinangwa chekufungisisa kwe SEOkusimba unyanzvi.